Ururrada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
ururrada shaqaalaha wershedaha
Muwaadin iswiidhish ah oo hayadda caalamia QM uga how-gelayay dalka Koongo Kinshaasa oo loogu jiraa baadi-goob.
Soomaalida Sweden ku cusub oo la liita caafimaad-darro maskaxeed
Jibril Muse Sultan:"Waa in cudurkan laga baqin"
Cilmi-baadhis ay Lanqeeyrta Cas dhowaan shaacisay middaasina oo ay ku weeydiiyeen qaxooti Soomaali Eriteriyaan iyo Suuriyaan aan weli sharci laheyn ayaa lagu ogaaday in ay la ildaranyihiin caafimaad-darro maskaxda ah, waxa af-iswiidhiska lagu yidhaahdo psykisk ohälsa.
Tartanka xeegada barafka sannadka 2017 oo ka bilowday Trollhättan
"Ciyaari waa gelin dambe"
Soomaalida taageero ayaan uga fadhinaa.
Magaalada Trollhättan oo dhacda koonfurta dalka Sweden ayuu toddobaadkan eynu ku jirno ka bilowday tartankii adduunka ee kubbadda xeegada barafka.
Muslimiinta qaxootiga ah ee qaata diinta kiristanka oo badatay
Baaderi Sven: waa u sheegnaa diin baddelasho in aan sharci lagu helin
Magangeliyo doonka qataa diinta kiristaanka ayaa ku soo kordhaya kaniisadaha Sweden.
Isku dhac ka dhacay safaarada Turkiga ee Stockholm
Dad ka tirsan ururka qaran ee Turkida iyo ururka Kurdiga ah ee lugu magacaabo NCDK ayaa iskugu dhacay meel ka baxsan safaaradda Turkiya oo Stockholm ku taala. Booliska ayaa labadan koox islamarkiiba kala qabtay.
Wallström "Turkiga iyo PKK wa in wadahadaalkii nabadeed ku laabtan"
Taariikh kooban xisbiga Moderat-ka
Taariikhda xisbiga Moderat-ka
Barashada xisbiyada siyaasadda Iswiidhen
Xisbiga Moderat-ka waxaa la dhisay ka dib markii kooxo badan oo muxaafad ah kana mid ahaa baalamaanka ay isu tageen si gooni ah, ayna dhiseen urur doorasho dadweyne sannadkii 1904.
Dawlad cusub oo la filaayo doorashada ka dib
Dawlad Cusub Doorashada ka dib
Dad badan ayaa aaminsan in Löfven noqonayo raysal wasare
Doorashada soo socota waxaa aad u yar rajooyinka laga qabo in ay soo noqoto xukuumad hadda ee ay ku midoobeen xisbiyada garabka midig. Sida waxaa ku tusaysaa ra’yi ururin cusub taas gaar ahaan cadaynaysa in xisbiga Moderaterna ay codbiyayaashu aanay niyad san u ahayn.
Stefan Löfven oo kasbanaya kalsoonida cod-bixiyayaasha
Kalsoonida hogaamiyayaasha xisbiyada
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Sooshiyaal Dimuqraadiga Stefan Löfven ayaa helaya kalsooni ku dhow mida uu haysto Hogaamiyaha xisbiga talada dalka haya ee Moderat-ka Fredrik Reinfeld.
Haweeenka Soomaaliyeed ma gaadhin dhigooda Aduunka
Löfven oo jooga Maraykanka
Hogaanka xisbiga (S) socialdemokoraten Stefan Löfven ayaa hadda socdaal wax barasho ku jooga dalka Maraykanka si u wax uga soo barto shaqaalaha dhanka doorashooyinka u qaabilsan madaxweeynaha dalkaasi maraykanka Barack Obama, si nashqada Obama isticmaalo usoo ogaado oo doorashada baarlamanka Sweden uga faa'iidaysto.
Sweden ayaan rabaa in aan ku dhinto
Sweden Ayaan Raba In Aan Ku Dhinto
Eshan Qorbani, wuxu dalkan Sweden ku yimid lix iyo toban jir kana soo safray dalka Afganistan magan galyana soo waydistay dalkan sweden, Ehsan ayaa loo diiday in sharci degenaasho ah laga siiyo dalkan sweden, kadib isagoo arinkaas ku mudaharaadaya ayuu naftiisa qabadsiiyey laakin naftu kama bixin, laakin naftiisa dhaawac badan ayaa soo gaadhay. Maxaase loogu abaal guday ? Dhagayso sheekadan
Qaramada midoobey iyo kufsiyadii horey uga dhacey dalka Bosniya
Lyssna på Dhacdo taariikhi ah oo baarlamanka saaka ka dhacday. Macallimmiin la xukumey oo iskuullada si khaldan uga shaqeeya.
Dhacdo taariikhi ah oo baarlamanka saaka ka dhacday. Macallimmiin la xukumey oo iskuullada si khaldan uga shaqeeya. ons 14 nov kl 16:33
Soo degso(2:16 min, MP3)